युगसम्बाद साप्ताहिक - कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ?
Thursday, 02.20.2020, 10:35am (GMT+5.5) Home Contact
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ?
Tuesday, 06.14.2016, 12:26pm (GMT+5.5)
राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा निकायदेखि कर्मचारी प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक चलखेलका कारण उत्पन्न जवाफदेहिताको अवस्थाले नेपाल विभिन्न आपराधिक समूहको मात्र हैन आतंकवादी संगठनकै क्रिडास्थल बन्नसक्ने खतरा अहिले हैन उहिलेदेखि नै मडारिंदै आएको हो । जनताको मुक्तिका लागि भन्दै पटकपटक हतियार उठेका छन् । अहिले तराईलाई अलग देश बनाउने भन्दै भित्रभित्रै सशस्त्र समूहको निर्माण भैरहेको संचार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् ।
यसबीचमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेको आतंकवादी समस्याका सम्बन्धमा हालै सार्वजनिक गरिएको एक रिपोर्टमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल आतंकवादीको क्रिडास्तर बन्नसक्ने खतरा रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाको यो खतराको संकेतलाई नेपालबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको छैन ।
हुन त अमेरिकी रिपोर्टको सत्यता आफैंमा प्रश्नवाचक हुने गरेको छ । इराकमाथि आक्रमण गर्नुअघि उसको रक्षा मन्त्रालयले इराकमा जैविक हतियार रहेको आरोप लगायो । तर, सद्दाम हुसेन शासन ढलेपछि इराकमा त्यस्तो हतियार नभएको प्रमाणित उसैले गर्याे । आतंकवाद उन्मूलनको नाममा अमेरिकाले यस्तै षड्यन्त्र गर्ने गरेको छ । नेपालका विषयमा यस्तो रिपोर्ट आउनु गम्भीर चिन्ताजन्य पक्ष हो । यसैको बहानामा नेपालमा विदेशी सेना घुसाउने आधार त तयार हुँदै छैन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ “भारतसँगको खुला सिमाना र काठमाडौंमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण नेपालमा आतंकबादीहरूको क्रिडास्थल बन्न सक्छ ।”
विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि कुशलतापूर्वक काम गरेर वाहवाही पाएको नेपालका सुरक्षा निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर आएको यस्तो रिपोर्टका विषयमा सरकारले अमेरिकी सरकारसंग प्रष्टिकरण माग्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । हुन त यस्तो चेतावनी र चिन्ता पटकपटक प्रकट गर्दै भारतले विमानस्थलको स्तरोन्नतिको नाममा सुरक्षा प्रणाली नै आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको थियो ।
अहिले अमेरिकाबाट सार्वजनिक भएको यो रिपोर्टको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण नभए पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नेपालभन्दा भारत नै बढी कारक रहने पनि बुझ्न गाह्रो छैन । नेपालमा आतंकवादी आकाशबाट झर्ने नभै भारतबाटै छिर्ने हुन् । अहिलेसम्म अपराधीहरू अधिकांश भारतीय भूमिबाटै छिरेको पाइएको छ
त्यसो त नेपालको कमजोर सुरक्षा प्रणाली मात्र हैन बिकाउ राजनीतिकर्मी र सुरक्षा अधिकारीहरूका कारण पनि बेलाबेलामा समस्या सिर्जना भएका घटना अनेक छन् । यस्तोमा अमेरिकाले नेपालमा आतंकबादविरुद्धको कानुन नै अहिलेसम्म बन्न नसकेको र भारतीय सीमामा परिचालित सुरक्षा फौजसमेत प्रभावकारी नभएको बताएको छ ।
रिपोर्टमा नेपाल प्रहरीसँग आतंकवादसँग लड्न सानो संयन्त्र भए पनि यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा शंका गर्दै नेपालको सुरक्षा निकायमा आधुनिकता प्रवेश गर्न नसक्दा आतंकवादी संगठनले त्यसको फाइदा उठाएर नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको छ ।
नेपालको तराईलाई अलग राज्य बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न जातीय संगठनहरू पहिचान सहितको प्रदेशको पक्षमा संघर्ष गरिरहेका बेला अमेरिकाबाट आएको यो रिपोर्टलाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन । आतंकवादीहरूले असन्तुष्ट पक्षलाई हातमा लिएरै आफूलाई सुरक्षित राख्ने गर्दछन् ।
अमेरिकाले यो प्रक्षेपण तथ्यमा आधारित भएर गर्यो कि कुनै राजनीतिक स्वार्थका कारण भन्ने विस्तारै खुल्ला तर अमेरिकाबाट सार्वजनिक भएको यो रिपोर्टपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार हटाउन भारत र अमेरिका लागिपरेको तथ्य उजागर गरिदिनुभयो ।
संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको र चीनसंग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरी भारत निर्भरता हटाएको मात्र हैन चीनसंग विकास आयोजनाका अनेक सम्झौता भएपछि भारत र अमेरिका दुबै तिल्मिसाएको तथ्य सबैका सामु छ । भारतले चीनसंग एकपटक युद्ध गरिसकेको छ । यी दुई मुलुकबीच व्यापार बाहेक अरु सबै कुरामा विवाद छ ।
उता अमेरिकाका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौति बनिरहेको चीनको नेपालप्रतिको उदारता सैह्य हुनसक्ने विषय नै हैन । विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीन यतिबेला महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका बेला नेपालमाथि प्रभाव विस्तार गरेर चीनको गति रोक्ने भारत, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको योजना रहेको लुकाउनुपर्ने विषय हैन ।
चीन जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ त्यसले भारतले खेल्दैमा चीनको सुरक्षामा खलल पुग्छ भन्नेमा रत्तिभर पत्यार गर्दैैन । त्यस्तै अमेरिकाले नेपालमाथि हस्तचक्षेप बढाएर अखण्ड चीनलाई कमजोर पार्नसक्छ भन्नेमा छैन । हो, नेपाली भूूमि भएर चीन बिरोधी गतिविधि भने बढिरहनसक्छ । चीन यसमा शतर्क छ । नेपालबाट चीनमा हुने भ्रमण र चीनबाट नेपालमा हुने हरेक भ्रमणमा यही कुरा दोहोरिइरहेका छन् ।
चीनले भारतलाई समेत साथ लिएर विश्व राजनीतिमा अघि बढ्न खोजेको हो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमतिर ढल्किएपछि चीनले छाडिदियो । चीन विश्का ६५ देशलाई जोड्ने गरी परम्परागत रेशम मार्ग पुनः संचालनमा ल्याउने ध्याउन्नमा छ । अमेरिका, युरोप वा भारत जस्ता मुलुकहरूका लागि चीनले दिएको यो सन्देश आफैंमा चित्ताकर्षक छ । चीनले भारत वा अमेरिकालाई नेपालमार्फत हैन, सक्छौं भने सिधा प्रहा गर भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।
अहिलेको वास्तविकता यस्तो छ । चीन नेपाललाई समृद्ध बनाएर आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने चाहना राख्छ । त्यसैले अमेरिका र भारतको विश्लेषण के हो भने नेपालको वर्तमान सरकार जति लामो समयसम्म टिकिरहन्छ, उनीहरूको स्वार्थमा उति नै धक्का लाग्नेछ । त्यसैले कहिले कांग्रेस र माओवादी उचालेर त कहिले एमालेकै नेताहरूलाई उचालेर सरकार ढाल्ने खेल भैरहेको छ । पछिल्लो समय एमालेकै नेताहरूले भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पार्टी बैठकहरूमै अभिव्यक्त गर्नु सामान्य कुरा हैन ।
अर्कोतिर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टलाई देखाएर संसदमा सरकारबिरुद्ध खनिने बाटो खोल्ने रणनीति रहेको पनि बुझ्न सकिन्न । तर, नेपालको संसदमा राष्ट्रिय चासो र महत्वको यस्ता विषयले कमै प्रवेश पाउने गरेको छ । यो विषय सरकारबिरुद्धको अस्त्र नभै अमेरिकाले कुन आधारमा यस्तो रिपोर्ट तयार पार्यो भनेर सरकारमार्फत जानकारी माग्न दवाव दिनपर्ने हो । तर, सांसदहरू यसमा गम्भीर देखिंदैनन् ।